Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 4
Madaxweyne Butafaliqa oo dib ugu soo laabatay wadankiisa Aljeeriya.
Iyadoo weli bananabaxyo xoogan ay ka socdaan wadanka Aljeeriya, kuwaas oo looga soo horjeedo musharaxnimada markii shanaad uu Butafaliqa ku doonayo inuu ku qabto talada wadankaas, ayaa madaxtooyada waxay ku dhawaaqday in madaxweynuhu soo noqday. War kasoo baxay xarunta madaxtooyada dalkaas ayaa lagu sheegay in gelinkii dambe ee shalay oo Axad ahayd uu Cabdil-caziiz Butafaliqa dib ugu soo noqday dalka, ...	Read More »
Dhamaan Rakaabka Diyaardii Itoobiya ee burburtay oo geeriyooday.(Faafaahin rasmi ah)
Waxaa la xaqiijiyay geerida inkabadan 100 ruux oo saarnaa diyaaradda ay leedahay Itoobiya oo maanta burburtay, kadib markii ay ka duushey garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Adis-Ababa. War kasoo baxay shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airline ayaa lagu xaqiijiyay dhimashada 157 ruux oo saarnaa diyaaradda Boing 737, taas oo saacadu markay ahayd 08:30am subaxnimo ka duushey garoonka diyaaradaha Bole ...	Read More »
DEG-DEG: Diyaarad ay leedahay Itoobiya Oo Burburtay.
Mid kamid ah diyaaradaha duulimaadka ee dowladda Itoobiya ayaa burburtay, taas oo ay saarnaayeen inkabadan boqol ruux oo rakaab ah. Diyaaradda burburtay ayaa ka duushey magaalada Adis-Ababa ee caasimadda Itoobiya, nooceeduna wuxuu ahaa Boeing 737, waxayna kusii jeeday magaalada Nairoobi ee caasimadda wadanka Kenya. Waxaa saarnaa ugu yaraan 149 rakaab iyo 8 ruux oo kamid ah shaqaalaha diyaaradda, iyadoona Raadaarka lagala ...	Read More »
March 10, 2019	2 Comments
Jamaacada Xurraasu-diin oo kamid ah jamaacaadka Jihaadiga ee ka dagaallama wadanka Suuriya ayaa soo saartay bayaan ay ku hambalyeyneyso weeraradii ka kala dhacay saldhiga Shawaarib ee dalka Afqaanistaan iyo kii hotel Makka Al-mukarrama ee magaalada Muqdisho. Bayaankan oo uu ku saxiixanyaahy hogaanka sare ee Jamaacada ayaa ciwaan looga dhigay “bayaan ku aadan duulaannadii barakeysnaa ee Afqaanistaan iyo Soomaaliya”, waxaana lagu ...	Read More »
Diyaarad dagaal oo ku burburtay xuduud beenaadka Hindiya iyo Pakistaan.
Iyadoo weli xiisada u dhexeysa wadamada Hindiya iyo Pakistaan ay sideeda tahay, walow degnaansho aan sidaas u badneyn la dareemayo, ayaa hadana waxaa xuduud beenaadka Hindiya iyo Pakistaan ku burburtay diyaarad dagaal. Diyaaraddan burburtay oo nooceedu yahay Mig 21a yaa ku dhacday nawaaxiga magaalada Biikaanar ee gobolka Raajistaan oo dhaca xuduud beenadka kala qeybiya Hindiya iyo Pakistaan. Sarkaal u hadlay ...	Read More »
Wargeys kasoo baxa dalka Faransiiska ayaa qoray warbixin dheer oo uu kaga hadlayo xaaladda Afqaanistaan iyo isbedelka la filayo in dalkaas uu lugaha la galo. Warbixin ciwaan looga dhigay “Kabul waxay isku diyaarineysaa soo laabashada Dhaalibaan” ayaa wariyadda wargeyska Lo-figaro ee magaalada Kaabul waxay sheegtay in magaalada laga dareemayo jawi ka duwan kii hore, oo u muuqdo mid lagu soo ...	Read More »
Museveni: Askarigii raba inuu gabar dharbaaxo ha aado Soomaaliya.
Madaxweynaha dalka Uganda baaderiga lagu magacaabo Yuweri Museveni ayaa gef cad oo aan geed loogu soo gamban wuxuu u geystay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. Museveni oo ka hor hadlayay saraakiil ka tirsan xukuumadiisa, ayaa soo hadal qaaday dhacdo dhawaan ka dhacday wadanka Uganda, taas oo askari Yugaandhees ah uu ku dharbaaxay haweeney askariyad ah oo katirsan ciidamada ...	Read More »
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 01-07-1440
Barnaamijka Dhacdooyinka dunida islaamka waa todobaadle maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato akhbaaraadkii ugu waaweynaa caalamka. Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 08-03-2019 Halkan ka dhagayso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 08-03-2019 tayo dhexe	Read More »
Maleyzia oo dowladda Masar u gacan gelisay dhalinyaro kasoo horjeeda maamulka Siisi.
Dowladda Maleyzia ayaa u dhiibtay maamulka dalka Masar, dhowr qof oo kamid ah dadka maamulkaas ugu xukuman dil toogasho ah, kuwaas oo mudooyinkii u dambeeyay ku sugnaa wadankaasi Maleyzia. Afarta ruux ee sida rasmiga ah loo xaqiijiyay in loogu gacan geliyay maamulka Siisi ee dalka Masar waxay kala yihiin Muxamed Cabdil-caziiz, Cabdullaahi Muxamed, Cabdi-raxmaan Cabdil-caziiz iyo Cazmi As-sayid Muxamed. Dowladda ...	Read More »
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Nairoobi, Joma Kenyata, ayaa waxaa ka jira xaalad cakiran, kadib markii ay shaqo joojin ku dhawaaqeen shaqaalaha madaarkaasi. Kumanaan Musaafur oo doonayay iney ka duulaan garoonka Joma Kenyata ayaa ku xayiran gudaha, waxaana jirin wax adeeg ah oo gebi ahaanba ka socda garoonka. Shaqaalaha ayaa dalbaday in loo kordhiyo mushaaraadka, inta taa laga dhaqan galinayana aysan ...	Read More »